हिमालय खबर | सन् २०२१ अमेरिकामा नेपाली समुदाय जो चर्चामा रहे
Tuesday, 28 June, 2022 | १४ असार २०७९, मंगलवार
सन् २०२१ अमेरिकामा नेपाली समुदाय जो चर्चामा रहे
-हिमालयखवर टीम ,
प्रकाशित १७ पुष २०७८, शनिबार | 2022-01-01 06:11:45
सन् २०२१ नेपाली अमेरिकामा नेपाली समुदायका कतिपय संघसंस्थाले तमासा देखाएको बर्ष रह्यो । सदस्यता संख्याका आधारमा अमेरिकामा सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल भएको एनआरएनए एनसीसी अमेरिका भित्र विवाद सल्टिनुको साटो बढेर गयो । एनआरएनए अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित भेलामा झण्डै हात हालाहालको स्थिति आयो ।
एनआरएनए अमेरिकाबाट शुरु भएको विवादले समग्र एनआरएनएलाई नै प्रभावित पारेको छ । यो विवादमा थुप्रै पात्रहरु छन् । जसलाई नेपाली समुदायले रुचाएका छैनन । विदेशमा बस्ने नेपालीको पक्षमा अब एनआरएनएले लविङ्ग गर्न सक्दैन कि भन्ने प्रश्न उठाउँदै विकल्पको खोज्ने प्रयास समेत सुरू भएको छ ।
आफुलाई नेपालको पहिलो र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट दावी गर्ने जनसम्पर्क समितिले अर्को तमासा देखाएको छ । अहिले अमेरिकामा जनसम्पर्क समिति आधिकारिक हौं भन्दै दावी गर्ने तीनवटा कार्यसमिति खडा भएकाछन् । जनसम्पर्क समिति कुनै विधि विधानमा चलेको छैन । यसवाहेक नेपालका राजनीतिक पार्टीको आस्था बोक्ने छ अन्य संस्थामा पनि विवादै विवाद छ ।
नेपाली समाज कसरी विभाजित हुँदैछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण त नेपाल समाज टेक्सस भयो । मुख्य रुपमा टेक्सस डलासमा केन्द्रित यो संस्थाको केही दिन अघि भएको चुनावमा समेत दुई प्यानल वन्यो । सामाजिक संस्थामा जीत–हारका लागि प्यानल किन बन्छ ? तँछाड मछाड किन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न नेपाली समुदायले उठाईरहेको छ ।
सन् २०२१ मा चर्चामा रहेका नेपालीको सूचि बनाउँदा पनि कतिपय नाम त्यहीवाट खोज्नु पर्ने अवस्था आयो । केही नाम चर्चामा त आए तर, उनीहरुले अमेरिका बस्ने नेपाली समुदायको हित गर्छन वा गर्दैनन त्यो हेर्न बाँकी छ । यी चर्चामा आएका नामले समुदायलाई विभाजित होइन संगठित गरुन भन्ने हाम्रो आशा छ । केही नाम भने केही आशालाग्दा छन् । यहाँ उल्लेखित नाम चर्चामा जो आए उनीहरुको हो । तर, कामको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा भने हामी समुदायलाई नै छाड्छौं ।
उपेन्द्रदेव आचार्यः (कानुनका एकमात्र नेपाली प्राध्यापक)
पछाडि चुल्ठो बाटेका, बोलीमा असाध्यै शिष्ट, वैदिक परम्परालाई आत्मसात गर्ने, धोती कछाड बेरेर पूजापाठहरूमा देखिने र संस्कृतका मन्त्र–श्लोकहरू कण्ठस्थ सुनाउने एकजना यस्ता व्यक्ति, जो अमेरिकाको कानुन अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि प्रतिष्ठित मानिन्छन्- उपेन्द्रदेव आचार्य ( विद्यावारिधि) ।
विक्रम सम्वत् २०२० मा तनहुँको चुँदी रम्घामा जन्मेका उपेन्द्रदेव आचार्य वासिङगटनस्थित गोन्जागा ल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुन् । आजका दिनसम्म अमेरिकामा कानुन पढाउने आचार्य एकमात्र नेपाली प्रोफेसर हुन् ।
अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा कानुनको प्राध्यापक हुनु मात्र आचार्यको विशेषता होइन। उनी ब्राजिल, फ्रान्स, चीन, भारत, इटाली, लेबनान, फिलिपिन्स, मेक्सिकोका अनेक ल स्कुलका भिजिटिंग प्रोफेसर पनि हुन् ।
विभिन्न देशका ल स्कुलहरूमा गएर दिने मन्तव्यलाई निकै महत्त्व दिने गरिन्छ । उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो), नेभीले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूका प्राज्ञिक सल्लाहकारसमेत रहेका आचार्यले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा पनि लडेका छन् । यिनै आचार्यको पहलमा आगामी जुलाई २९-३० मा नेपालमा ‘एसियन सोसाइटी अफ इन्टरन्यासनल कन्फ्रेन्स हुँदैछ, जहाँ ‘इन्टरन्यासनल ट्राइबुनल फर द ल अफ द सी’ का अध्यक्षका साथै ‘इन्टरन्यासनल कोर्ट अफ जस्टिस’का न्यायाधीशहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रचार र हल्लाखल्लाको दुनियाँबाट प्राय: टाढै बस्न रुचाउने आचार्य, नेपालमा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसँगै एउटा नेपाली मिडियाले हालै लिएको अन्तर्वार्ताका कारण पनि यतिबेला चर्चामा छन्। खासमा आचार्य यसअघि नै चर्चामा आउनुपर्ने पात्र हुन् ।
गत जुन महिना अघि टेक्ससको युलेस सिटीमा बस्ने टीका पौडेललाई स्थानीय नेपाली समुदायका थोरैले मात्र चिन्दथे । नेपालबाट अमेरिका आएको डेढ दशक भएपनि व्यबसाय र रोजगारीमै व्यस्त थिए पौडेल । नेपाली समुदायलाई घरायशी प्राविधिक समस्या पर्दा घरमै पुगेर सहयोग गर्ने उनको सहयोगी बानीले गर्दा चिनेजानकोे सर्कलमा उनी लोकप्रिय भने थिए ।
यही लोकप्रियता र आँटले गर्दा टेक्सस राज्यको इतिहासमै नाम लेखाउन उनी सफल भए । नेपाली समुदायको आप्रवासीले टेक्ससको भाइब्रेन्ट सिटी युलेसमा पहिलोपटक सिटीको बोर्ड सदस्य (काउन्सिल मेम्बर) मा निर्वाचित भए ।
चितवनमा प्राध्यापनरत पौडेल अमेरिका आएपछि नेपालको पार्टीगत राजनीतिबाट अलग्गै रहे । ‘हामीले मातृभूमिको लागि सहयोग गर्ने सदभाव राख्ने हो, कुनै दल विशेषको राजनीति यहाँबाट गर्दा सुहाउँदैन’ उनी सधैं यही भन्थे र यही अडानमै रहे । बरु अमेरिकाको राजनीतिमा लाग्ने हो भने नेपाललाई चिनाउन, बढ्दा सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उनको धारणा थियो । त्यही धारणाले उनी अमेरिकी राजनीतिमा होमिएका हुन् ।
नेपालीमुलका व्यक्तिले अमेरिकाको राजनीतिमा प्रवेश गरेर सफलता पाउन निकै मेहनत आवश्यक पर्छ । अमेरिकी समुदायको विश्वास जित्न सजिलो छैन । पौडेलले जित्नेमा नेपाली समुदायकै अग्रजहरु समेत विश्वस्त थिएनन् । तर लगातारको खटाई, विश्वास आर्जनले गर्दा पौडेलले शुद्ध अमेरिकी एरिक वन्सलाई हराउन उनले सफलता पाए ।
प्रयास गरेमा सफलता मिल्छ । प्रयासनै नगर्ने हो भने कहिल्यै अघि बढिदैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेर उनी अघि बढेका थिए । अमेरिकाको राजनीतिमा सिटी तहमा कुनै पनि दलले प्रत्यक्ष उम्मेदवार खडा गर्दैनन् । तर पनि उनलाई डेमोक्रेटिक पार्टीले समेत सहयोग गरेको थियो । एकातिर आप्रवासी समुदायको सहयोग, अर्कोतिर डेमोक्रेटिक पार्टीको इण्डोर्समेन्टले गर्दा पौडेलले चुनाव जिते ।
पौडेलको विजयले अन्य राज्य र सिटीहरुमा बस्ने नेपालीमुलका अमेरिकनहरुमा पनि आँट र भरोसा बढेको छ । ह्यारी भण्डारी भन्दा पछिपछि लागेर आगामी दिनमा नेपालीहरु अमेरिकी मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने संभावना र संकेत बढेका छन् ।
एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका निर्वाचित अध्यक्ष हुन बुद्धिसागर सुवेदी । यसले मात्र उनको परिचय सिमित छैन । अहिले एनआरएनए भित्र देखिएको विवादमा पनि उनी अग्रपङ्क्तीमा छन् । विभिन्न देशमा रहेका एनआरएनए एनसीसी बीच छलफलको संयोजन पनि उनले गर्दै आएका छन् । आईसीसी केन्द्रिय नेतृत्वले नचाहेपनि उनको संयोजनमा एनसीसीहरुको दुईवटा विश्व भेला सम्पन्न भयो । यो भेलाले एनआरएनए आईसीसीलाई विभिन्न सुझाव दिई दवाव दिदैं आएको छ ।
एनआरएनए अमेरिकामा करिब २० हजार सदस्य छन् । कयौं राज्यमा च्याप्टर छ । एनआरएनए अमेरिकामा सवैभन्दा ठुलो संजाल भएको नेपाली समुदायको संस्था पनि हो । तर, यो सधैं विवादमा भने छ । केही महिना अघि भएको निकै प्रतिस्पर्धात्मक चुनावबाट अध्यक्षमा सुवेदी निर्वाचित भए । निर्वाचनको क्रममा उनले सयौं नेपालीसँग अन्तकृया गरे । कयौं राज्यमा पुगे । बुद्धि सुवेशी पेशाले व्यवसायी पनि हुन । उनले अहिले व्यवसाय पनि विस्तार गरिरहेका छन् ।
सुवेदीले एनआरएनए अध्यक्षका रुपमा आफ्नो कार्यकाल शुरु गर्न नपाउँदै एनआरएनए विवादमा पर्न गयो । पद हस्तान्तरणका लागि राखिएको सम्मेलननै विवादमा पर्यो । यो सहज रुपमा हुन सकेन । एनआरएनए भित्र एक पछि अर्को विवाद आईरहेको छ । यो विवादमा उनले जश पाउने योगदान भने दिईसकेका छैनन् । एनआरएनए एनसीसी मध्ये सवैभन्दा धेरै सदस्य भएको एनआरएनए अमेरिकालाई नेतृत्व गर्ने बुद्धि सुवेदीले आउने दिनमा कस्तो भुमिकामा प्रस्तुत हुन्छन् र विवाद समाधानमा कति सफल हुन्छन् यो परिक्षा हुन बाँकी छ ।
साराहाना श्रेष्ठ पहिलो पुस्ताकी नेपाली मुलकी अमेरिकन हुन् । उनले आउने नोभेम्बर महिनामा हुने न्यूयोर्क राज्यको एसेम्ब्ली सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन् । आफु बस्दै आएको न्युयोर्क एसेम्ब्ली डिष्ट्रिक १०३ मिड हड्सन् म्याली क्षेत्रवाट उनले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेकी हुन् । तर, यसका लागि उनले केही चरण पार गर्न बाँकी छ ।
उनले आफुलाई पहिलो पुस्ताको नेपाली अमेरिकन, जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि अभियन्ता र वार्किंगं क्लासको पक्षधरका रुपमा परिचय दिदैं यसका लागि चुनाव उठ्न लागेको वताएकी छिन् ।
स्वास्थ्य सवैका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने उनको अर्को मुद्दा छ । मेडिकल केयर आम्दानी, रोजगार र लिगल स्ट्याट्समा केन्द्रित हुनुहुदैंन भन्ने उनको मान्यता छ ।
सन् २००१ मा कम्प्युटर ग्राफिक्स पढ्न अमेरिकी आएकी श्रेष्ठले त्यसको केही वर्षपछि अमेरिकी नागरिकता लिएकी थिईन । नेपालको बसाई भन्दा अमेरिकामा वढी समय बिताएको बताउँदै उनले परिवर्तनको पक्षमा आफुले राजनीति गर्ने दावी गरेकी छिन् ।
डा. यादव पण्डित पेशाले अमेरिकाको कलेजमा भोतिकशास्त्र (फिजिक्स) पढाउँछन् । त्यसमा पनि अहिलेको चर्चित विषय न्यूक्लियर फिजिक्सका ज्ञाता हुन् । तर, एनआरएनए होस वा राजनीति दुवै तिर उनी चर्चामा हुन्छन् । एनआरएनए निर्वाचनमा बुद्धि सुवेदीको समुहलाई समर्थन गर्दा उनी चर्चामा रहे । कतिले उक्त समुहको रणनीतिकारको संज्ञा पनि दिए । तर, डा पण्डित आफै भने सल्लाह दिए पनि रणनीतिकार हो भन्ने कुरा मान्दैनन् ।
अहिले एनआरएनए विवादमा पनि डा. पण्डित जोडिएका छन् । विवाद समाधानका लागि बनाईएको उच्चस्तरीय सुझाव समितिमा उनी पनि छन् । एनआरएनएमा कुल आचार्य पक्षलाई जिताउन डा. पण्डितले पहल गर्दै आएका थिए । आचार्य समुहको वैठकमा उनीपनि सहभागि हुदैं आएका छन् । त्यही भएर उनलाई अहिलेको विवाद टुंग्याउन समितिमा राखिएको हो ।
एनआरएनए बाहेक डा. पण्डित नेपालको पुरानो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा अमेरिकावाट प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी भए । यी उदाहरणले नेपाल विद्यार्थी संघका पुर्व महामन्त्री डा. पण्डित फिजिक्स पढाएर मात्र बसेका छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । उनको यो सकृयताले नेपाली समुदायलाई कस्तो फाइदा पुग्छ त्यो भने आगामी दिनले देखाउने छ ।
किरण गजमेरले नेपालको टेलिभिजन च्यानलमा आएको रियालिटी शो भ्वाइस अफ नेपालको यस बर्ष प्रसारित तेस्रो संस्रकरणमा तहल्का मच्चाए । सयौं प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्दै किरण उक्त संस्करणको विजेता वने । अमेरिकाको मिजौरी देखि काठमाडौमा भ्याइस अफ नेपालको यात्रा सहज थिएन । उनको लगन र प्रतिभाले साथ दियो ।
किरण नेपालमा जन्मिए । भुटानी शरणार्थीका रुपमा परिवारसंग अमेरिका आए । संगित प्रति उनको लगाव थियो । अभ्यास गरिरहे । उनले एक टेलिभिजनसंगको अन्तवार्तामा नेपालसंघ जोडिन पनि उक्त प्रतियोगितामा सहभागी भएको वताएका छन् । उक्त प्रतियोगिताका क्रममा आठ महिना काठमाडौ वसे । पछि फेरि नेपाल जाँदा नेपालको इमिग्रेशन कानुनले गर्दा उनी चर्चामा पनि आए । यो चर्चा सकारात्मक पनि हो । नेपालवाट अमेरिका आएका एक लाख भन्दा वढी नेपाली मुलका भुटानीले नेपाललाई आफ्नो देश ठान्छन् । नेपालले यसवारेमा केही सोच्नु पर्ने अवस्था पनि छ । किरणले आफ्नो गायकीले मन मात्र जितेका छैनन । ठुलो समुहको मनमा रहेको एउटा राजनीतिक विषय पनि चर्चामा ल्याएका छन् ।
दुई बर्ष यता नेपाली समुदायमा छिटो गतिमा प्रचलित हुँदै गएको विषय शेयर र क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी हो । अहिले नेपाली समुदायको सानो जमघटमा पनि शेयर र क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्ने कोही न कोही नेपाली भेटिन्छन् । शेयरमा पाँच सय डलर देखि मिलियन डलर भन्दा बढी लगानी भएका नेपाली छन् । न्यूयोर्क स्टक एक्स्चेञ्जमा सुचिकृत कतिपय कम्पनीहरु नेपाली माझ चर्चित पनि बन्दै गएका छन् । चीनको इलेक्ट्रिक कार बनाउने कम्पनी निओ देखि कोलम्बियाको गाँजा उत्पादक कम्पनीका शेयरमा नेपालीले लगानी गरेका छन् ।
यो बजारमा नेपाली माझ चर्चित नाम हो आशिष संग्रौला । उनलाई पछ्याउने थुप्रै नेपाली छन् । उनले फेसबुकमा रविनहुड नेपाली समुह संचालन गर्छन यसमा शेयरमा लगानी गर्ने चासो राख्ने थुप्रै नेपाली जोडिएका छन् । त्यहाँ आशिष लगायत कयौंले विभिन्न सुझाव टिप्पणी राख्छन् ।
वासिङगटन डीसी नजिक भर्जिनियामा बस्ने आशिष कुनै बेला तीन मिलियन डलर सम्म शेयर किनवेचको व्यवस्थापन गरेको बताउँछन् । शेयर बजारमा लगानी गर्दा सवैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष के हो ? यसमा आशिष भन्छन इमोशन कन्ट्रोल हो जसले आफ्नो इमोशन नियन्त्रण गर्न सक्दैन त्यसलाई शेयर बजारले डुवाउन पनि सक्छ । पहिलो थौ पैसा लिएर शेयर बजार वुझ्दै लगानी वढाउनु उपयुक्त हुने सुझाव उनको छ । शेयर बजार मार्फत चर्चामा आएका आशिष एनआरएनए अमेरिकाका बोर्ड सदस्य पनि हुन् ।
उनको नेपालको शेयर बजारमा समेत संलग्न हुने लक्ष्य छ । यसका लागि केही योजनाका पनि छन् ।
केही साता अघि सम्मलोक तिवारीको परिचय अमेरिकामा व्यवसाय गर्ने नेपाली, समुदायमा सकृय व्यक्ति र एनआरएनए अमेरिकाका पुर्व उपाध्यक्ष भन्ने थियो । तर, केही दिन अघि उनको परिचय थपिएको छ । उनी नेपालको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
पुर्व पञ्चहरुले स्थापना गरेको उक्त पार्टीमा विदेशमा बस्ने नेपालीका तर्फवाट उनले उम्मेदवारी दिएका थिए । तिवारी निर्वाचित भए । नेपालमा पुर्खाली थलो स्याङ्जा जिल्लाका तिवारीको पुर्व पञ्चहरुसँग पहिले देखिनै राम्रो जान पहिचान थियो । यसले उनलाई केन्द्रिय सदस्य बन्न सहयोग पनि गर्यो । राजेन्द्र लिङगदेनले नेतृत्व गरेको यो पार्टीले नेपाली राजनीतिमा अव कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चासो भने बढेको छ । यससगै लोक तिवारीले केन्द्रिय सदस्यका रुपमा कसरी कुन स्थानमा आफुलाई नेपालको राजनीतिमा राख्न सफत हुन्छन् यो हेर्न बाँकी छ ।
गत जुलाई ३१ तारिक टेक्ससको अर्भिङमा एउटा कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र, जस्लाई स्थानीय रुपमा पशुपतिनाथ तथा बुद्ध मन्दिरका नामले चिनिन्छ । कार्यक्रममा स्थानीय एक व्यक्तिले नयाँ बन्न लागेको मन्दिरका लागि एकलाख डलर दान दिने घोषणा गरे । ती व्यक्ति थिए परिचित व्यबसायी कृष्ण पन्त ।
पन्तले एकलाख डलरको घोषणा गरेपछि अमेरिकाभरिको नेपाली समुदायबीच उनी को हुन् र कस्तो पृष्ठभूमिका हुन् भन्ने बारेमा निकैनै चर्चा र सोधीखोजी भएको थियो । धेरैले उनको सहयोगी मनको प्रशंसा गरे ।
नेपालको गोरखाको गाइखुरमा जन्मिएर सन् १९९६ मा अमेरिका आएका पन्त टेक्ससमा निकै सफल व्यबसायीका रुपमा चिनिन्छिन् । नेपाली समुदायले गौरव गर्ने प्रोजेक्टमा रुपमा अघि बढिरहेको युलेसको नयाँ मन्दिर बनाउन उनले एकलाख डलर दिने घोषणा गर्दा तालीको गडगडाहटले तीन मिनेटसम्म हल गुञ्जियो । पन्तभन्दा अघि कसैले पनि त्यति ठूलो रकम मन्दिरलाई दिने घोषणा गरेका थिएनन् । नत त्यसपछि नै उनले बोलेको रकमलाई उछिनेर सहयोग गर्ने कोही महादानी निस्किएको छ ।
एकलाख सहयोगको घोषणा गरेका पन्तले ५० हजार रकमको चेक समेत केही साता अघिनै मन्दिरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको मन्दिर बोर्ड अफ ट्रष्टीका अध्यक्ष विनय अर्यालले जानकारी दिए । उनको दम्पत्तिनै अहिले मन्दिरको संरक्षक पदमा छन् ।
टेक्ससको डिएफडब्लु मेट्रोप्लेक्समा पर्ने भ्यालीरेञ्चमा परिवार सहित बस्दै आएका पन्तले अरु नेपाली जस्तै ग्याँस स्टेशन, ग्रोसरी स्टोरमा लगानी गरेका छन् । तर त्यो भन्दा बढी रियलस्टेट, मोटलहरुमा आफ्नो लगानीलाई केन्द्रित गरेका छन् । आठ वटा ग्याँस स्टेशन, चारवाट होटल, बिजनेस कम्प्लेक्स र हाउजिङ मार्केटमा पन्तको ठूलो लगानी छ । आफूमात्र नभएर आफ्नो सम्पर्कमा आउने जति सबैलाई उद्यमशीलता बढाउन सहयोग गर्ने उनको स्वभाव छ ।
मन्दिर निर्माणका लागि एकलाख डलरको घोषणा गरेर दानवीरका रुपमा अमेरिकाभरिका नेपाली समुदायमा उनी परिचत भएका छन् । यसअघि नेपाली समाज टेक्ससमा आवद्ध भएर काम गरेपनि पछिल्ला केही वर्षहरुमा उनी आफ्नो व्यबसाय विस्तार र उद्यमशीलताका लागि सहयोगमा सकृय भए । मन्दिरका लागि उनले एकलाखको घोषणा गरेपछि सहयोगदाताको बाढीनै लागेको छ ।
एनआरएनए अमेरिकाको गत निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार थिए तिलक केसी । चारजना उम्मेदवारमध्य वाककला, शव्द चयन, स्पष्टशैली केसीमा भएको टिप्पणी सदस्यहरूको थियो । तर यिनै विशेषताका धनी केसीले सबैभन्दा कम मत प्राप्त गरे । तर, उनले धेरैको मन भने जितेका थिए । एनआरएनएमा सुधार गर्नु पर्छ भन्ने अभियानका साथ उनी अध्यक्षका प्रत्याशी भएका थिए । निर्वाचनका क्रममा उनलाई सुन्नेहरुले ताली पनि पिटे ।
चार उम्मेदवार बीच भएको ककसमा सवैभन्दा राम्रो प्रस्तुती तिलककै थियो । उनले चर्चा पाए तर, बहुमतको मत पाएनन् । त्यसवेला उठाएका मुद्दा भने जायज भएको अहिले पुष्टि हुदैं छ ।
यस अघिको कार्यकालमा तिलक एनआरएनए अमेरिकाका बोर्ड सदस्य मात्र थिए । बोर्ड वैठकमा अन्य सहकर्मीहरुले उनको प्रस्तुतीको प्रशंसा पनि गर्थे ।
पोखराका तिलक विद्यार्थी काल देखिनै राजनीति गर्थे । मिठो बोल्थे । अहिलेपनि संस्था खोलेर समाजमा सकृय छन् । तिलक व्यवसायी पनि हुन् । उनी अहिले एनआरएनएको कुनै जिम्मेवार तहमा छैनन् । उनका लागि अबको समय आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गरेर देखाउने अवसर भने छ ।
पछिल्लो समयमा नेकपा माओवादी निकट प्रवासी संस्था जनप्रगतिशील मञ्च अमेरिकाको अध्यक्ष चुनिएका छन् । अमेरिकाको उत्तर तर्फ क्यानडासँग सीमा जोडिएको विन्सकन्सिन राज्यमा बसोबास गर्ने केसी विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्ववियू सचिव समेत थिए ।
-हिमालयखवर टीम -
सन् २०२० अमेरिकामा नेपाली, जो चर्चामा रहे
सन् २०१९ अमेरिकामा नेपाली, जो चर्चामा रहे
सन् २०१८ मा अमेरिकाका नेपाली, जो चर्चामा रहे
सन् २०१७ अमेरिकामा नेपाली, जो चर्चामा रहे
-हिमालयखवर टीम १७ पुष २०७७, शुक्रबार
सन् २०२० पनि अब इतिहास बन्दैछ । २०२० को बर्ष तनाव, विरोधाभास र त्राशमै गयो भन्दा फरक पर्दैन । बर्षको शुरुमै कोभिड १९ को समाचार आउन शुरु भएको थियो । चीनमा देखिएको यो यो भाइरसले छिट्टै संसारका सबै मुलुक ...
-हिमालयखवर टीम २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार
हिमालयखबरले अमेरिकामा बसोवास गर्ने नेपाली समुदायका बर्षभरीका चर्चित व्यक्ति वा संस्थाको सूचि सार्वजनिक गरेको यो तेस्रो श्रृङ्खला हो । अमेरिकामा नेपाली समुदाय तुलनात्मक रुपमा सानो छ । आधिकारिक र अद्याव ...
डीभी भर्नेले विचार पुर्‍याउनु पर्ने कुराहरु
हिमालय खबर १० कार्तिक २०७६, आईतवार
अमेरिका — देश डीभीमय भएको छ । बजार, सडक र चोकका कुनाकुना डीभी चिठ्ठाको फाराम भर्ने सुचनासहितका सन्देशहरुले भरिएका छन् । अमेरिका आउने अरु बाटो नभएका र आउन इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि यो सुवर्ण मौका हो ...
हिमालय खबर ३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार
श्रीमान श्रीमति एक दिन श्रीमान घर आउँदा निकै अबेर भएछ । अनी घर आएर ढोका बाट भित्र छिर्न न पाउदै श्रीमतिले भनिछन । श्रीमति : कहाँ जानु भएको थियो ? मैले हजुरको अफिसमा पनि फोन गरी सोधे । हजुर ...